2019: Qaar ka mid ah arrimihii dhex maray Trump iyo Soomaalida - BBC News Somali
2019: Qaar ka mid ah arrimihii dhex maray Trump iyo Soomaalida
25 Disembar 2019
Sannadkan sii dhammaanaya waxaa jiray warbixinno dhor ar oo aannu ka qornay Donald Trump iyo Soomaaliya. Sidoo kale waxa qaar ka mid ah qeyb ka ahayd Ilhaan Cumar oo Trump ay si weyn isu hayaan.
Taas waxay dhalisay in Trump iyo Soomaalida ay si weyn isu bartaan, inkastoo xilligii ololaha uu ku jiray xitaa uu si aad ah u hadal hayay dadka Soomaalida ee ku nool Minnesota.
Qaar ka mid ah warbixinnadaas sannadkan ayaan halkan idiinkugu soo gudbineynaa:
1- Trump oo wax ka baddalay weerarradii Mareykanka ee Soomaaliya
Xigashada Sawirka, Al-Shabaab ayaa wali gacanta ku heysa qeybo ka mid
Bilowgii bishii January ee sannadkan, maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa la sheegay in tan iyo markii uu xafiiska uu la wareegay, xoojiyay weerarrada xagga cirka ah ee ay Mareykanka ka fuliyaan dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in sannadkan 2019-ka ay sare u sii kacaan.
La taliyaha dhinaca amaanka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa mar uu bishii Disembar jeedinayay khudbad ku saabsaneyd howlgalladooda ka dhanka ah kooxaha ay dagaalka kula jiraan ee ku sugan Afrika waxa uu yiri: "kooxaha argagixisada ah ee ka howl gala Afrika waxay si joogto ah u bartilmaameedsadaan muwaadiniinta Mareykanka ah iyo danaha dowladdeenna".
2- Halkey iskala qaadeen Ilhaan Cumar iyo Donald Trump?
13/02/2019 -Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump iyo Ilhaan Cumar ayaa marar badan warbaahinta isu mariyay hadallo kulul iyo eedo.
Xilligii ugu kululeyd waxay ahayd bishii February oo Trump ugu baaqay Ilhaan inay is casisho, ka dib markii ereyo lagu tilmaamay "Yuhuud naceyb" ay ku qortay barteeda Twitter-ka.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibanaada Aqalka Kongreska ee Mareyknka ee taageersan Israa'iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuuda, arrintaasi oo sababtay in Gudoomiyaha Kongreska, Nancy Pelosi ay sheegtay in Ilhaan looga fadhiyo inay raaligeli ka bixiso hadalkaasi.
Xigashada Sawirka, JP
Trump ayaa xilligaas sheegay in Yuhuud naceybka aysan melnana uga banaaneyn Maraykanka.
"Ilhan Cumaar hadalkii ay tiri waa mid aad u xun, waxayna ila tahay inay iska casishaa aqalka Kongreska ama ay ugu yaraan isaga tagtaa xubinimada guddiga arrimaha dibadda ee aqalka," ayuu yiri Trump.
Wixii intaas ka dambeeyay waxaa jirtay marar dhowr ah oo uu Trump wax ka sheegay Soomaaliya iyo Soomaalida. Haddaba dhowrkan qodob ee soo socda ayaan ku eegeynaa hadalladii iyo ficilladii Trump ee ku wajahnaa Soomaaliya iyo Soomaalida:
3- Donald Trump oo banaanka soo dhigay fikradda uu ka qabo dalal ay ka mid tahay Soomaaliya
Bishii July ee sannadkan waxaa Trump lagu eedeeyay in uu soo xigtay hadallo ay warbaahinta adduunka ay aad u faafisay oo uu ka sheegay afar xildhibaan oo ku jira Aqalka Congress-ka Maraykanka, oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar, oo asal ahaan ka timid Soomaaliya.
Inkastoo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid diirran, islamarkaana uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, haddana waxaa markii ugu horreysay arrintaas la sheegay in ay muujisay fikradaha uu madaxweynaha Maraykanka ka qabo Soomaaliya.
Trump ayaa xildhibaanadan dumarka ah u sheegay in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen, islamarkaasna ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka heysta.
Mid ka mid ah xildhibaanada oo ah Ms Ocasio-Cortez ayaa ku dhalatay isbitaal ku yaala degmada Bronx ee New York, halkaas oo qiyaastii 12 mile u jirta meesha uu Donald Trump ku dhashay.
Wuxuu yiri "Waa arrin xiiso leh in aan aragno xildhibaanada dumarka ah ee xisbiga dimoqoraadiga, kuwaas oo asal ahaan ka yimid dalal dowladahooda ay gebi ahaanba yihiin kuwa masiibo ah, oo musuqmaasuq hareeyay, ahna kuwa ugu xun ee adduunka ka shaqeeya, in hadda dadka reer Ameerika oo ah kuwa ugu awoodda badan adduunka ay u sheegeen sida wax loo maamulo".
4- Naceybka Trump uu u qabo qaxootiga Soomaalida oo la shaaciyay
Bishii October ee sannadkan, bogga intarneed-ka ee telefishinka CNN ayaa daabacay xog laga soo xigtay buug ay qoreen weriyeyaal ka tirsan wargeyska The New York Time oo ka hadlaya sida madaxweyne Trump uu u neceb yahay qaxootiga ka yimid Soomaaliya.
Sida lagu sheegay qoraalkaasi CNN, bilihii ugu horreeyay ee xukunka madaxweyne Trump ayaa madaxweynuhu wuxuu Elaine Duke oo xilligaasi ahayd kusimaha arrimaha ammaanbka gudaha weydiiyay sababta ay u mamnuuci la'dahay qaxootiga ka imaanaya Soomaaliya.
Xogta ku saabsan arrintan ayaa lagu daabacay buug cinwaan looga dhigay "Colaadda Xudduudda", waxaana buuggan lagu muujiyay aragtida madaxweyne Trump ee ku aadan dadka ka soo jeeda Soomaaliya, kuwaasi oo uu arko in ay halis ku yihiin Mareykanka.
Sida lagu xusay buuggaasi, "madaxweyne Trump iyo Stephen Miller ayaa u muuqda in si gaar ah ay u neceb yihiin Soomaalida, waxa ayna Soomaalida tusaale u soo qaadan jireen mar kastaa oo ay doonayaan in ay muujuyaan halista dadka qaxootig ahi ay u keeni karaan Mareykanka.
5- Trump: "Meel walba oo ay tagto way xumaataa, Soomaaliya ayay ka bilowday"
Xigashada Sawirka, THE WASHINGTON POST VIA GETTY IMAGES
Bishii November, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku weeraray safiirkii hore ee Mareykanka ee dalka Ukraine, Marie Yovanovitch, iyadoo ay socoto dhegeysiga caddeymaha xil ka qaadista.
"Meel walba oo ay Marie Yovanovitch aadday way xumaatay," Mr Trump ayaa sidaasi qoray. "Waxay ka bilowday Somalia, sidee ayay taasi noqotay?"
Mar arrintaasi wax laga weydiiyay, ayay Ms Yovanovitch ugu yeertay "mid hanjabaad ah".
Mr Trump ayaa mar kale soo jawaabay, isagoo ku doodaya in qoraalladiisa aysan ahayn kuwo hanjabaad ah.
Wuxuu weriyeyaasha u sheegay inuu daawaday qeyb ka mid ah dhegeysiga caddeymaha, isla markaana uu u arko mid sharaf dhac ah.
Madaxweyne Trump ayaa haatan wajahaya mooshin xil ka qaadis ah kaas oo haatan sugaya in aqalka senate-ka ee dalkaas ay ansixiyaan.
3- Nin Soomaali ah oo Trump ka mamnuucay magaaladiisa
Xigashada Sawirka, CHRIS SAUNDERS
Bishii March, Maajid Maajid oo 29 jir qaxooti Soomaali ah, ayaa ku dhawaaqay go'aan la yaab leh, xilli uu shir gudoominayay golaha deegaanka Sheffield ee Britain, "taas oo walaaltinimo loogu muujinayo dadka reer Mexico", sida uu sheegay.
Waxaa uu xilligaa Mr Trump ku tilmaamay "nin nacas ah" islamarkana laga mamnuucay magaalada" qiimaha badan" ee Sheffield.
Trump wuxuu xilligaas ku dhwaaqay dhimista tirada qaxootiga Soomaalida ee dib u dajinta la siinayo
Xilligii uu ololaha ku jiray ee sannadkii 20160-kii wuxuu ka sheegay isu soo bax uu ku qabtay magaalada Minneapolis in uu dadaal u gali doono sidii aad loogu xakameyn lahaa qaxootiga dib u dajinta laga siinayo gobolka Minnesota.
Gobolka Minnesota waxa uu hoy u yahay tirada qaxootiga ugu badan ee Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka.
Waxa uu sheegay in tan iyo intii uu xukunka qabtay uu hoos u dhigay qaxootigii dib u dajinta laga siinayay guud ahaan Mareykanka.
"Tan iyo intii aan xafiiska imid waxaan dhimay qaxootiga 85% " ,ayuu yiri Mr Trump.
Waxa uu khubda ka jeedinayya isu soo bax lagu qabtay Target Center.
"Sanooyin badan hoggaamiyeyasha Washington ayaa waxay gobolkiinna keeneen gobolkiina qaxooti badan iyada oo aan la eegin saamayn ka dhalan karta ee dhanka iskuulada bulshada iyo canshuur bixiyayaasha " ,ayuu yiri madaxwayne Trump.
"Waxaan idin ballanqaadayaa ka madaxwayne ahaan in bulshada aan siiyo fursad ay go'aan ugu yeelan karaan siyaasadaha qaxootiga iyo in la dajiyo qorsha sare loogu qaadayo turxaan bixin la smaeeyo iyo xakameynta muhaajiriinta"ayuu intaa ku daray.
13 Febraayo 2019
Donald Trump: Waxa uu madaxweynihii Mareykanka ee baxay ka aaminsanaa Soomaaliya iyo dalal kale
Naceybka Trump uu u qabo qaxootiga Soomaalida oo la shaaciyay
8 Oktoobar 2019
Soomaaliga Trump ka mamnuucay magaaladiisa oo haddana aad u dalacay
Ma dhici kartaa in wax ka yar 40 maalin gudahood lagu qabto doorashada Soomaaliya?
Waa kuwee 10-ka dal ee Afrika ugu awoodda badan dhanka milatariga sanadkan?
Maxaan ka ognahay xaaladda gabdhaha Soomaalida ee Nairobi 'laga afduubtay'?